အဖမျးခံရပွီးမှ ပွနျလှတျလာတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ရဲတပျဖှဲ့အား ပနျဆယျလို ဝုနျးပွီ.... - MM Live News
အဖမျးခံရပွီးမှ ပွနျလှတျလာတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ရဲတပျဖှဲ့အား ပနျဆယျလို ဝုနျးပွီ….
အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံပါ သုံးဦးကို လှတျပေးလိုကျပါပွီတဲ့။ ဖမျးမိတဲ့ဆေးပွားတှကေ မူးယဈဆေးဝါး မဟုတျလို့ ဓါတုဗဒေဝနျရုံးက ပွနျကွားပါသတဲ့….
အခုက မူးယဈဆေးလညျး မဟုတျဘူးဆိုတာ အဖွထှေကျလာပွီ။ သတငျးအမှားပေးတဲ့ သတငျးပေးကို ဘယျလို အရေးယူမလဲ။ မသခြောဘဲ ဇှတျဖမျးတဲ့ လူတှရေော၊
အထူးသဖွငျ့ ရိုးရိုးမဖမျးဘဲ ရှယျဇှနျးတပျပွီး အခှကျရိုကျဖမျးတဲ့ လကျစှမျးပွပုဂ်ဂိုလျထူးကွီးကရော ဘယျလို အထူးတာဝနျယူပေးမလဲ နားစှငျ့ထားပါရစနေျော…
ခတျေကိုက ကျောဖီဆိုငျထိုငျရငျး သကွားလုံးက အျောတို ကကျတမငျးဖွဈပွီး မကျြခှကျရိုကျ အဖမျးခံရနိုငျတဲ့ခတျေ….
မရတော့ဘူး… မတရားတှေ ကွညျညိုနပွေီ…..ခွသေလုံးဖကျမိတော့မယျ….
Source : အိပနျဆယျလို
အဖမ်းခံရပြီးမှ ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အား ပန်ဆယ်လို ဝုန်းပြီ
အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံပါ သုံးဦးကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့။ ဖမ်းမိတဲ့ဆေးပြားတွေက မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်လို့ ဓါတုဗေဒဝန်ရုံးက ပြန်ကြားပါသတဲ့….
လွတ်မြောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ မေးစရာ မေးခွန်းတွေ ရှိလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြစ်ရှိတယ် မရှိဘူး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဟုတ်မဟုတ် မသေချာဘဲ သတင်းအရဆိုတာနဲ့ လူကြားသူကြားထဲ သောက်ခွက်ရိုက်ပြီး ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့… အဲ့ကိစ္စကို ရှင်းပြပါ။
(၁)လူမြင်ကွင်းမှာ ဖမ်းဆီးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်ပုတ်ခေါ်ဆောင်ခြင်း
(၂)မူးယစ်ဆေးဟုတ်မဟုတ် မသေချာဘဲ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပုဒ်မအပါအဝင် ပုဒ်မတွေတပ်ခြင်း
အခုကိစ္စက နာမည်ကြီး အဆိုတော်ဖြစ်နေလို့သာ Candy က Candy ဖြစ်တာ။ ဒါတောင် အစက ကက်တမင်းဆေးပြားလို့ သတင်းတက်သေးတယ်။
အကယ်၍ ဖြိုးပြည့်စုံနေရာမှာ သာမန်မျက်နှာမွဲ လူငယ်တစ်ယောက်ဆိုရင်ရော Candyက Candyပါလို့ အဖြေထွက်ပါ့မလား။
နောက်တစ်ချက်က အခုကိစ္စက အဆိုတော်မို့ ဘေးလူက ဗီဒီယိုရိုက်ထားလို့ မျက်ခွက်ရိုက်တဲ့ကိစ္စက လူတွေသိသွားတာ။ အကယ်၍သာ ဒီနေရာမှာ အခြားသူတွေသာဆို ဒီကိစ္စလည်း လူမသိနိုင်ဘူး။
ကိုယ်ကတော့ ဖြစ်တဲ့နေ့ကတည်းက ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီး နည်းနည်းမှ မကျေနပ်ဘူး။ မူးယစ်ဆေး ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အသာထား၊ မူးယစ်ဆေးပဲ ထားဦး… ခုခံနေတာမဟုတ်ဘဲ ရန်ပြုနေတာ မဟုတ်ဘဲ ရိုက်နှက်စရာအကြောင်း တစ်ပြားသားဖိုးမှ မရှိဘူး။
အခုက မူးယစ်ဆေးလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဖြေထွက်လာပြီ။ သတင်းအမှားပေးတဲ့ သတင်းပေးကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ။ မသေချာဘဲ ဇွတ်ဖမ်းတဲ့ လူတွေရော၊
အထူးသဖြင့် ရိုးရိုးမဖမ်းဘဲ ရှယ်ဇွန်းတပ်ပြီး အခွက်ရိုက်ဖမ်းတဲ့ လက်စွမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးကရော ဘယ်လို အထူးတာဝန်ယူပေးမလဲ နားစွင့်ထားပါရစေနော်…
ခေတ်ကိုက ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်း သကြားလုံးက အော်တို ကက်တမင်းဖြစ်ပြီး မျက်ခွက်ရိုက် အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ခေတ်…..
မရတော့ဘူး… မတရားတွေ ကြည်ညိုနေပြီ….ခြေသလုံးဖက်မိတော့မယ်….
Source : အိပန်ဆယ်လို
ဆီးခြိုကသြညျ့ အကောငျးဆုံး သဘာဝဓာတျစာ…
ကနျြနသေေးတဲ့တရားခံတှကေို ဖမျးမိဖို့ ညီမပွနျလာပေးပါ…..
အကယ်ဒမီညမှာ ခီမောင်နှံ ရလိုက်တဲ့ ဆု တဆု
March 24, 2019 MM Live News
မိနစ်အနည်းငယ်မှာပင် ကြည့်ရှူသူအဆမတန်များသွားခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်တို့ အနုပညာညီအစ်မရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်
November 17, 2018 MM Live News
ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် ကော်ပီဇာတ်ကားများကို ဆုမပေးဟု ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးပြော
January 20, 2019 MM Live News